News Collection: किन ठूला हुँदैछन् महिलाका वक्षस्थल ?
किन ठूला हुँदैछन् महिलाका वक्षस्थल ?
केही समय पहिले गरिएको अध्ययनले महिलाहरुका स्तनको आकार पुस्तै पिच्छे बढ्दै गएको देखाएको थियो । बेलायतमा गरिएको सो अध्ययन विश्वभरीकै महिलाको हकाम लागु हुने भन्दै विभिन्न जैविक तथा भौतिक कारणहरुले गर्दा महिलाहरुको स्तनको आकार बढ्दै गएको विज्ञहरुले बताएका थिए । वास्तवमा स्तनको आकार बढ्नु भनेको स्तनमा बोसो बढि थुप्रनु हो । तर स्लिम महिलाहरुमा समेत वक्षस्थलको आकार अस्वभाविक रुपमा ठूलो बन्नुमा केवल बोसो मात्र जिम्मेबार छैन । महिलाहरुमा स्तन तन्तुहरुको मात्रा नै बढेको छ । आखिर किन यस्तो भैरहेको छ त ? भन्ने कुराको चुरो भने हालै मात्र पत्ता लागेको छ ।